လွတ်လပ်သောအားလပ်ရက် | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ဒုတိယလူတန်းစားကားတစ်စီးတှငျအဘယျအရပျကိုပိုကောင်းပါသလဲ ကြည့်ပါ။ အဘယ်ကားကို circuit ကိုပိုကောင်း? အစအဦး၌, အဆုံးမှာ, အလယ်၌တည်၏။ သွားကြဖို့2ရက်ပေါင်း
ကြိုတင်စာရင်းသွင်းထားသောထိုင်ခုံရထားများတွင်အကောင်းဆုံးထိုင်ခုံကဘာလဲ။ ပုံကိုကြည့်ပါ။ ဘယ်ကားကပိုကောင်းတာလဲ။ အစအ ဦး မှာအဆုံးမှာအလယ်မှာ။ ခရီးသွားခြင်း2ရက်အဘယျသို့သောနေရာများသည်ကလေးများနှင့်ပိုမိုယူလေ့ရှိသနည်း နေရာ ၁-၄ ...
အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများတစ် Schengen ဗီဇာရရှိရန်လိုအပ်လဲ? ? ကခြင်းမရှိဘဲအားလုံးလုပ်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိ ??
Schengen ဗီဇာရရှိရန်မည်သည့်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်သနည်း။ ? ထိုသို့တစ်နည်းနည်းနဲ့မှာအားလုံးမပါဘဲလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင် ?? သင်တတ်နိုင်သည်! ကျွန်ုပ်သည်ဘာမျှမရှိ၊ ဘာမှမရှိဟု ... ) Schengen ရရှိရန်အတွက်စာရွက်စာတမ်းများစာရင်း။
နာမကိုအမှီ neskoko မိလ္လာနှင့်ရေနုတ်မြောင်းရေကန်များကို ကျေးဇူးပြု. !
ကျေးဇူးပြု၍ မိလ္လာအနည်းငယ်နှင့်အဆုံးမဲ့ရေကန်များအမည်ပေးပါ။ ရေဆိုး: Trostenskoe, Baikal, Ladozhskoe, Onezhskoe, Bestochnoye: Aral, Balkhash, Rudolph, Air ကို,
ဒီဂရီအတွက်အနောက်မြောက်၏ညှနျကွားထဲမှာ azimuth ကဘာလဲ?
အနောက်မြောက်ဖက်တွင် azimuth သည်ဒီဂရီဖြစ်သည်။ 90 315 Azimuth ဆိုသည်မှာသံလိုက်အပ်၏မြောက်ဘက်သို့ ဦး တည်ချက်နှင့်လိုချင်သောနေရာဆီသို့ ဦး တည်သောလမ်းကြောင်းအကြားဒီဂရီဖြင့်တွက်ချက်သောထောင့်ဖြစ်သည်။
သင်အင်္ဂလိပ်သိ? Mozhite လွယ်ကူရှင်းလင်းတင်ဆက်အကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြကူညီပါ ???
အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်လား? ကူညီပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ရှိ SIMPL အကြောင်းတစ်ခုခုပြောပြနိုင်ပါသလား။ လက်ရှိရိုးရှင်းသောအတွက်အပြုသဘောဆောင်စာကြောင်းများဥပမာ။ နေ့တိုင်းကျောင်းသွားတယ် - ငါနေ့တိုင်းကျောင်းသွားတယ်။
မြေအောက်စက်မဲ့လေယာဉ် Khimki ဖို့ဘူတာမှရရန်မည်သို့
Khimki ဘူတာမှ glider metro station ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ။ ဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲ၊ ဘယ်လောက်ကြာလဲ၊ အဓိကအရာ ... Khimki ဘူတာမှ (၁၀ မိနစ်) ရုံလမ်းတစ်လျှောက် Leningradskoe အဝေးပြေးလမ်းသို့သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ Mayakovsky ...
ရထားမြို့အ Abhaziido သှားဖို့ကိုဘယ်လို
Abkhaziido ဘယ်ရထားကိုသွားရမလဲ။ Sochi မြို့။ အမည်, ပစ္စည်း Adler ရန်။ Abkhazia ကိုလေယာဉ်၊ ရထား၊ ဘတ်စကားဒါမှမဟုတ်ကားနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ဆူကူမီလေဆိပ်မရှိသေးပါ
Алматы၊ ဘယ်ကိုသွားရမလဲပြောပြပါ။ ရုပ်ရှင်ရုံနှင့်စျေးကွက်သို့။ almaty ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးပါသလား၊ ငါသည်သင်တို့ကိုအောက်ပါအကြံပေးနိုင်ပါတယ် ...
မော်စကိုကိုသွားတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ယောက်ဘယ်မှာသွားနိုင်မှာလဲ။ ရှာပုံတော်သွားပါ။ ပွဲကြီးကိုသွားဖို့စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးစိတ်မပျက်ပါနဲ့” လို့မော်စကိုမြို့မှာအခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။ ထိုထက်ပို။ ခက်ခဲသည်မဟုတ်လျှင် ...
ကျေးဇူးပြု၍ Vnukovo မှမော်စကိုသို့၊ မော်စကိုမှ Domodedovo သို့မည်မျှရသင့်သည်ကိုပြောပြပါ
ကျေးဇူးပြု၍ "Vnukovo" မှမော်စကိုသို့၊ Moska မှ "Domodedovo" သို့မည်သို့သွားနိုင်မည်နည်း။ မည်သို့ရယူရမည်နည်း Vnukovo လေဆိပ်သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲမော်စကိုမှကီလိုမီတာ ၃၀ အကွာ (30 km ... )
ဆောင်းရာသီမှာ Minsk ကိုသင်ဘာမြင်နိုင်ပါသလဲ ဘယ်သွားမလို့လဲ ဆောင်းရာသီ၌ပင်နွေရာသီ၌ပင်မြို့တော်သို့သွားရန်အမြဲတမ်းနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့နေဖို့ဘယ်မှာပိုကောင်း Adler, သွားချင်
Adler မှာ Olip ကအခုလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတော့နေရာကောင်းတွေမရှိဘူး။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင်ပင်လယ်သည်ညစ်ညမ်းနေသည် + မြို့တွင်းလေဆိပ်များ - လေယာဉ်များပျံသန်းသည် - ဆူညံသံသာလွန်သည်။
Tver Stepan Razin Embankment Russia, Tver, nab တွင်တွေ့ရမည့်စိတ်ဝင်စားစရာကဘာလဲ။ Stepana Razin Starovolzhsky တံတားရုရှား၊ Tver Starovolzhsky တံတား (တံတားအဟောင်း) Tver မြို့ရှိ Volga မြစ်ကို ဖြတ်၍ မော်တော်ယာဉ်တံတား။ တည်ဆောက်ခဲ့သည် ...
ပိုကောင်း Abkhazia တစ်အားလပ်ရက်ဖြုန်းဖို့ဘယ်မှာရှိသနည်း
Abkhazia ကိုသွားပြီးဘယ်နေရာကကောင်းလဲ? ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Gagra ၌ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်ကြိုက်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်နယူး Athos သို့၊ UAZ ရှိရေနှင့် Ritsa ရေကန်သို့သွားခဲ့သည်! ...
Sheremetyevo Khimki ဖို့ဘူတာမှရရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Khimki ဘူတာမှ Sheremetyevo သို့ဘယ်လိုသွားရမလဲ။ 817. Planernaya မက်ထရိုဘူတာ - Sheremetyevo-1 လေဆိပ် (ခ / z Khimki, Rodionovo, Planernaya ပလက်ဖောင်း, Sheremetyevo-2 လေဆိပ်) (မော်စကိုကားရပ်နား 15) ။ 851. မက်ထရို "မြစ် ...
ကလေးတွေနဲ့အတူ Adler ကနေ Pitsunda ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကလေးများနှင့်အတူပီဇာသို့ Adler မှမည်သို့သွားရမလဲ။ Adler ရထားဘူတာမှဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်မိတ္တူ "Psou" ကိုနယ်စပ်အထိကူးယူပါကဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ် "Pitsunda" ကားတစ်စီးကိုစီး။ ပြproblemနာမရှိပါ။ တက္ကစီ…
အိမ်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အခန်းထဲတွင်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်တည်ရှိမှုကိုမည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဓာတ်ငွေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ခေါ်တဲ့ထိုကဲ့သို့သော devices များရှိပါတယ်။ သူတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနိယာမသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးဆုံးဖြတ်ရမည့်ဓာတ်ငွေ့ဖွဲ့စည်းမှုပေါ်မူတည်သည်။ ဒါ့အပြင်…
ကမ္ဘာတဝှမ်း hitchhike ဖို့ပိုက်ဆံမပါဘဲလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလား?
ပိုက်ဆံမရှိဘဲကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ကားအကူးအပြောင်းလုပ်နိုင်ပါသလား။ လုံးဝမရှိ - သံသယ, ငွေအနည်းဆုံးငွေပမာဏနှင့်အတူ - အစစ်အမှန်။ သင်ဒီမှာပါ: avp.travel.ru ။ အတွေ့အကြုံလေ့လာပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငွေမရှိဘဲ ...
အဘယ်အရာကိုဖိနပ် trekking သလဲ? အဘယ်အရာကိုကအကြောင်းအထူးပါသလဲ အဘယ်သူကိုထိုသို့ရည်ရွယ်သလဲ?
တောင်တက်ဖိနပ်ဆိုတာဘာလဲ သူမအတွက်ဘာထူးခြားလဲ ဒါကဘယ်သူ့အတွက်လဲ။ trekking ဖိနပ်ကိုဓနရှင်လူတန်းစားများတီထွင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့နှင့်မတူသည့်ကိုယ်ပိုင်တောင်တက်ခြင်းသဘောတရားရှိသည်။ တကယ်တော့…
Omsk ထံမှ Ekaterinburg မှကားဖြင့်သွားပါဖို့ဘယ်လို?
Omsk မှ Yekaterinburg သို့မည်မျှကြာကြာမောင်းရမည်နည်း။ ရထားဖြင့် ၂.၅ ရက်ကားတိုက်လျှင်မြန်သည်။ တစ်နေ့လျှင်ကီလိုမီတာ ၉၀၀ ခန့်ရှိသည်။ ဘယ်ကား၊ ဘယ်မြန်နှုန်း၊ ဘယ်စိတ်အခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်။ ခြေလျင် ...
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,815 စက္ကန့်ကျော် Generate ။